Al shabaab oo go’doomiyay magaalada Marko – Somali Top News
Al shabaab oo go’doomiyay magaalada Marko
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay dhibaatooyin ay sheegeen in ay ka jirto degmada Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose,kadib markii halkaasi ay Go’doomiyeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab.
Maxaad Maxamed Ciise oo ah Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in degmadaas dadka ku nool ay heestaan dhibaatooyin adag oo sababay Go’doominta ay geliyeen Al-shabaab.
Waxa uu baaq u diray Madaxda dowladda federaalka in ay ka qeyb qaataan sidii loo furi lahaa Wadooyinka soo gala degmada iyo kuwa kabaxa si Bulshada degmada Marka uga baxaan dhibaatooyinka heesta.
Sidoo kale waxaa uu sheegay Wasiir ku-xigeenka Arrimaha Gudaha mamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in amniga degmada Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose uu yahay mid wanaagsan,hayeeshee ay xiran yihiin oo kaliya Wadooyinka qaar ee soo gala halkaasi.
Hadalka Maxaad Maxamed Ciise ayaa kusoo aadaya,iyadoo weli dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab ay u Go’doonsan tahay qeybo kamid ah degmada Marka ee Gobolka Shabeelle,waxaana dhawaan maamulkii degmadaas ka jiray lagu sameeyay Isbedel cusub.
← Sudan’s Bashir moved to prison as protesters rally
Waa kuma Cabdullahi Dool oo raali gelin ka dalbaday dowladda Federalka Soomaaliya? →
Ciidamada Kenya oo kordhiyay dilalka ay u geysanayaan dadka shacabka ah ee ku nool Jubooyinka
Dagaal u dhaxeeya ciidanka dowladda iyo Al shabaab oo ka dhacay duleedka Buulo-Burde